भान्साको नल कसरी बदल्ने?
घर / नल गाईड / भान्साको नल कसरी बदल्ने?
2020 / 10 / 29 वर्गीकरणनल गाईड 1185 0
तपाइँको भान्सालाई उत्तम र ताजा देखाउनको लागि एक नयाँ नल स्थापना गर्नु एक उत्तम तरिका हो। त्यहाँ बजारमा विभिन्न नलहरू उपलब्ध छन्, जुन स्टाइलिश छन् र आधुनिक र अनुपम लुक प्रदान गर्छन्। तपाईं म्याट कालो स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भान्साको नल तल तान्नुहोस् तपाइँको भान्छालाई एक सुरुचिपूर्ण रूप दिन। यस लेखमा हामी तपाइँलाई तपाइँ कसरी भान्साको नल बदल्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउनेछौं।
त्यसोभए, हामी यस चरणको साथ चरणको मार्ग निर्देशनबाट सुरू गरौं कसरी भान्छाको नल बदल्ने।
उपकरण आवश्यक छ
स्क्रूड्रिभर (in-इन -१)
पानी आपूर्ति बिच्छेद गर्नुहोस् र पानी बन्द गर्नुहोस्। नयाँ नल स्थापना गर्न, तपाईंले पुरानो हटाउनुपर्नेछ। पुरानो नल हटाउनुहोस्, र यसले सिink्कमा प्वाल गर्दछ। पुरानो नलसँग जोडिएको पुरानो स्प्रेयर लाइन काट्न कैंची प्रयोग गर्नुहोस्।
दुबै तातो र चिसो पानी आपूर्ति लाइनहरू गुमाउन समायोज्य रेन्च प्रयोग गर्नुहोस्। अब, पुरानो भान्छाको नलबाट पानी लाइनहरू अनस्क्रुभ गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले नलबाट अनस्क्रुभ गर्नुभयो, तपाईंलाई बगिरहेको पानी पक्रन बाल्टिन चाहिन्छ।
पुरानो भान्छाको नल हटाउनुहोस् र हटाउनुहोस्। यदि तपाइँको पुरानो भान्छाको नलमा स्प्रेयर एट्याच्मेन्ट छ भने, तपाइँले प्लस एकाइ अनसक्र्यु र बन्द गर्नु पर्छ।
पुरानो नल हटाए पछि, अब यो समय भान्छाको नल बदल्ने समय हो। साबुन वितरक अनस्क्रुभ गर्नुहोस्। त्यस पछि, पोतीन्ट्सलाई सिमाना वरिपरि लागू गर्नुहोस् र यसलाई केन्द्रबाट टाढा प्वालमा राख्नुहोस्।
एस्कुटचेन कभरको अन्डरसाइडमा धेरै प्लम्बर पुट्टी लागू गर्नुहोस्, र त्यसपछि यसलाई किचन सिंकको तीन सेन्टर होलमा राख्नुहोस्। भित्तामा नल फिट गर्नुहोस् र यसलाई सहि स्थिति दिनुहोस्। दिशा सधैं उपयोगकर्ताको दिशा हुन्छ, त्यसैले नललाई प्रयोगकर्ता दिशा तिर समायोजित गर्नुहोस्।
एकचोटि भान्साको नल ठाउँमा छ, र तपाईंले यसको दिशा समायोजित गर्नुभयो। अब यो पानी आपूर्ति लाइनहरु स्थिति को समय छ। तपाइँ सबै गर्न को लागी आंशिक रूपमा थ्रेड गरिएको रिंग मा पेंच छ। पहिले फाइबर धुनेको स्लाइड, त्यसपछि धातु धुने र त्यस पछि पानी आपूर्तिको लाइनहरुमा। अब तिनीहरूलाई पूर्ण पेच र तिनीहरूलाई कस।
प्लास्टिक नट थ्रेडि so गरेर साबुन औषधालय जडान गर्नुहोस्, र तपाईंलाई नट कसिन बेसन रेन्च चाहिन्छ। स्प्रे नलीमा वजन स्थानान्तरण गर्नुहोस् र दुबै छेउहरू जडान गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि ती स्थानमा तंग छन् र जोडिएका छन्।
अब यो आपूर्ति लाइनहरु कनेक्ट गर्न को लागी समय छ। तातो र चिसो लाइन समायोजित गर्नुहोस् ताकि तिनीहरू एक अर्को र नलीको साथ हस्तक्षेप गर्दैनन्। एकचोटि तपाईंले स्थिति समायोजित गर्नुभयो, अब जडान गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई अवस्थित पानी आपूर्ति लाइनको साथ कस गर्नुहोस्।
यो भान्छाको नल स्थापनाको अन्तिम चरण हो। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको पानीको आपूर्ति सक्रिय छ, दुबै तातो र चिसो। निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै चुहावट छैन। यदि त्यहाँ चुहावट छ भने, चुहावट समायोजित गर्नुहोस्। अत्यधिक प्लम्बरको पोटीन हटाउनुहोस्, साबुन प्रबन्धकमा साबुन थप गर्नुहोस्, र पम्प सुरक्षित गर्नुहोस्।
अघिल्लो :: म्याट कालो पुल डाउन किचनको नलको फाइदा अर्को: कसरी भान्साको नल छनौट गर्ने बारेमा मार्गनिर्देशन